Wasiir Sacad Oo Lagu Casuumay Shirweynaha Iskaashiga Brazil Iyo Afrika – somalilandtoday.com
Wasiir Sacad Oo Lagu Casuumay Shirweynaha Iskaashiga Brazil Iyo Afrika
(SLT-Hargeysa)-Wasiirka wasaaradda arrimaha dibedda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Somaliland Dr. Sacad Cali Shire ayaa la xaqiijiyey in lagu casuumay shirweyne bisha November ka dhaci doona dalka Brazil, isla markaana uu ka mid yahay madaxda khudbadaha ka jeedin doona.
Sida lagu baahiyey qoraal ka soo baxay qabanqaabiyeyaasha shirweynaha Iskaashiga Brazil iyo Afrika, oo wakaalada wararka SomalilandMonitor baahisay shalay ayaa lagu sheegay in Dr Sacad Cali Shire ku wehelin doonaan madax ka socda caalamka sida wasiirkii hore ee caafimaadka Brazil Mr. José Gomes Temporão, Wasiirkii hore Arrimaha Dibedda iyo Jaaliyadaha dalka Guinea-Bissau Mr. Conceição Nobre Cabral, iyo Wasiirkii hore ee Arrimaha Dibeda iyo Difaaca Brazil Amb Celso Amorim.
Shirweynaha oo markii lixaad qabsoomaya ayaa hal-ku-dhiga sannadkan loo doortay, “Xoojinta Dhalinyarada” Qaababkii loo gaadhi lahaa horumar waara, isla markaana magaalada Salvador ka qabsoomi doona 22 ilaa 23 November, ayaa la filayaa inay ku kulmaan hogaamiyeyaal caalamka ka kala socda, si loo horumariyo iskaashiga u dhexeeya dalka Brazil iyo qaarada Afrika, loo helo is-dhexgal iyo isfaham.
Qoraalka qabanqaabiyeyaasha shirweynaha ayaa lagu sheegay in Dr Sacad Cli Shire oo Wasiirka Arrimaha Dibedda loo magacaabay sannadkii 2015, isla markaana uu hore u ahaa Wasiirka Qorsheynta Qaranka, sidoo kalena xilal sare ka soo qabtay hay’addo caalamka ah sida FAO iyo Baanka Aduunka.
Dr Sacad oo ah dhaqaaleyahan, ayaa aqoontiisa ku soo qaatay jaamacada Havana, ee dalka Kuuba, halka uu waxbarashada heerka labaad iyo PhD ku dhamaystay jaamacada Pennsylvania ee Maraykanka.